Mad for Each Other – Gold Channel Movies
Episode3May. 26, 2021
Episode4May. 31, 2021
Episode7Jun. 07, 2021
Episode 8 Jun. 08, 2021
Episode9Jun. 09, 2021
Episode 10 Jun. 14, 2021
Episode 12 Jun. 16, 2021
Mad for Each Other 2021(이 구역의 미친X)
ဒီတစ်ခေါက်တစ်ဆက်ပေးမဲ့ကားလေးကတော့ kakao tvနဲ့ netflixတို့ကပြသပေးမဲ့ အချစ်ဟာသ ဇာတ်မြူးကားလေးဖြစ်ပါတယ်
Noh hwi ohက ဂန်းနမ်ရဲစခန်း အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့က စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူ အရာရာအဆင်ပြေနေတဲ့ ဘဝကိုရထားတယ်လို့ တွေးထားခဲ့ပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အလှည့်အပြောင်း အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့် ဒေါသမထိန်းနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Lee min kyungကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိပြီး ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ လှပပြီး လူများလေးစားရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုနဲ့ သာမာန်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မတော်တဆမှုကြောင့် သူမဘဝဟာပျက်စီးပြီး အရာရာပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့် သူမဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံကြည်တော့ပဲ လူတိုင်းအပေါ် ဒေါသနဲ့ဆက်ဆံတတ်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ဘဝတွေပြောင်းလဲခဲ့ရတာလဲ။ဒေါသကြီးသူနှစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေ့ဆုံကြမလဲဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးခံစားကြည့်ရှုရမဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်စဉ် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့များတွင်ပြသမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် GC Teamနဲ့အတူ ဒီweb dramaလေးကို အတူတူခံစားကြည့်ရှုရအောင်။
Translated by Chu,Kham and Snowflake
RosalindSeptember 4, 2021Reply
PoppySeptember 3, 2021Reply
I’m trying to findaasmr [bit.ly] template
IrishSeptember 2, 2021Reply
BessSeptember 1, 2021Reply
time to be happy. I’ve read this publish and if I could I want to counsel you few attention-grabbing issues or tips.
ShermanAugust 29, 2021Reply
guest writers to write content for you? I wouldn’t mind creatingapost or elaborating on some of the subjects you write related
to here. Again, awesome web hosting what site!
Min HtooJune 15, 2021Reply
Thu TaJune 8, 2021Reply
Ep7လည်း link မပေါ်သေးဘူး
NillJune 7, 2021Reply
Thu TaJune 3, 2021Reply
Ep6link မပေါ်ဘူး
JYubiJune 3, 2021Reply
FutureJune 3, 2021Reply
Ep6pl
Nay Ng ChoMay 28, 2021Reply